Banyere Anyị - Cranquil CBD
Ranlọ ọrụ dị jụụ dị mpako ịbụ onye na-emepụta naanị ngwaahịa CBD na ahịa nke Food Alliance kwadoro, otu ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ na-esetịpụrụ ụkpụrụ US maka ọrụ ugbo na-adịgide adịgide afọ iri abụọ.
Ndi oru ugbo anyi soro ntuziaka banyere oru ugbo kwesiri ekwesi, hu na anyi CBD na-abịa site na ugbo na-echekwa gburugburu ebe obibi, chekwaa akụ ndị sitere n'okike ma na-elekọta mmadụ. Akwụkwọ asambodo a na-egosi na a na-enyocha ugbo, oke ọhịa, ma ọ bụ ụlọ ọrụ njem maka ụkpụrụ asambodo siri ike nke chọrọ usoro dị mkpa iji kwagide gburugburu ebe obibi, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na akụnụba ogologo oge.
Ọ bụghị ihe ijuanya na Tranquil CBD bụ isi mmalite kachasị mma maka ndị na-elekọta ahụ ha na ụwa ha.
Na Tranquil CBD, anyị kwenyere na ngwaahịa anyị kachasị mma, ngwaahịa ahụike dị mma nke sitere na CBD sitere na hemp na-enye ọgwụgwọ kachasị mma iji bulie ahụike na ọdịmma nke ndị ahịa anyị.
Naanị ihe kacha mma
Ngwaahịa CBD dị jụụ na-amịpụta si kacha mma, ọkachamara egbute hemp osisi. Ngwaahịa anyị abụghị GMO ma enweghị ọgwụ ahụhụ, ahịhịa, ma ọ bụ ọgwụ kemịkal. Ngwaahịa anyị niile bụ ogbe anwale nke ụlọ nyocha nke atọ na mmanụ anyị adịchaghị mma maka oriri. Yabụ ọ bụrụ n'ị na-achọ ngwaahịa CBD kacha mma n'ahịa, lee anya n'ihu. Tranquil CBD bụ azịza gị! Mee ka ngwaahịa anyị dị mfe iji mee ka ndụ gị dị mfe.
Ebumnuche anyị bụ iweta ngwaahịa dị elu hemp cannabidiol (CBD) nke sitere n'ahịa. Anyị na-arụ ọrụ ịkụziri ndị ọzọ na uru nke hemp wepụ, ọ bụkwa ihe mgbaru ọsọ anyị iji ngwaahịa anyị kachasị mma nke kachasị mma na ụlọ ọrụ iji nyere aka mee ka ahụike na ahụike nke ndị ahịa anyị.
TRANQUIL CBD & HEMP Ugbo